Hoyga > Wararka > Wararka warshadaha > Hordhaca alaabada caagga ka sameysan
Balaastikadu waa iskudhisyo polymer ah, oo badanaa loo yaqaanno balaastik ama makiinado, kuwaas oo lagu polymerized by daro ama uumiga monomers sida alaabta ceeriin. Waxay si xor ah u beddeli karaan halabuurkooda iyo qaabkooda. Waxay ka kooban yihiin xarkaha loo yaqaan 'synthetic resins', filler, plasticizer, stabilizer, saliidaha, midabbada iyo waxyaabo kale oo lagu daro.
Biyaha guud ee macdanta iyo dhalooyinka kaarboonka kaarboonka leh ayaa laga sameeyaa polyetylen terephthalate (PET). 1946, Boqortooyada Ingiriiska waxay daabacday rukhsaddii ugu horreysay ee diyaarinta PET. Sannadkii 1949-kii, qaaciddadii 'ICI' ee Ingiriiska ayaa dhammaystiray tijaabadii tijaabada ahayd, laakiin ka dib markii Shirkadda DuPont ee Mareykanka ay iibsatay patent-ka, aaladda wax soo saarka waxaa la aasaasay 1953, wax soosaarkii ugu horreeyay ee warshadeedna waxaa laga dareemay adduunka.
1, caabbinta saliidda, caabbinta dufanka, enic acid, milmay iska caabinta alkali, dareeraha badankood.
2, daahfurnaan sare, gudbinta iftiinka waxay noqon kartaa in ka badan 90%, badeecadaha la soo baakadeeyay waxay leeyihiin shaqo bandhig fiican.
3, wuxuu leeyahay caabbinta heerkulka hooseeya ee aadka u wanaagsan, wuxuu u adkeysan karaa -30â „ƒ heerkulka hooseeya, ee u dhexeeya isticmaalka -30â„ „-60â„ ƒ.
4, gaaska iyo uumiga uumiga biyuhu wuu hooseeyaa, labadaba caabbinta gaaska fiican, biyaha, saliida iyo waxqabadka urta gaarka ah.
5, daahfurnaan sare, waxay xannibi kartaa iftiinka ultraviolet, iftiin wanaagsan.
Dhalooyinka sharaabka dib looma warshadeyn karo biyo kulul, kuleylkaan maadada ah ee u adkeysanaya 70â ƒ ƒ, heerkulka sare wuxuu kala diri doonaa walxaha waxyeelada leh, kaliya waxay ku haboon tahay cabitaanka diiran ama cabitaanada la qaboojiyey, dareeraha heerkulka sareeya ama kululaynta waa sahlan tahay in la qaabeeyo, waxaa jira waxyaabo waxyeelo leh jirka bini'aadamka ayaa milmay.
Xiga:Hordhaca alaabada PC-ga ee balaastigga ah